जंगबहादुर Archives - Fonij Korea
जंगबहादुर भन्दा पहिला बेलायतमा पुगेका नेपाली को थिए ?
बि.सं. १९०६ माघ ४ गते काठमाडौबाट बेलायत यात्राको लागी निस्केको जंगबहादुरका टोली निकै ठूलो थियो । १२०० सैनिकको साथमा अन्य भाइभारदार, कर्मचारी, चित्रकार, भान्से, पण्डित सबलाइ लगेका थिए, जंगबहादुरले साथमा । यो टोली फागुन २ मा ढाका र फागुन २४ मा कलकत्ता पुगेपछि केही दिन त्यही घुम्नको लागी रोकिए । जगन्नाथ पुरीमा जंगबहादुरले ५००० रूपैया मन्दिरलाई दान गरेका थिए । आजकाे रकममा परिवर्तन गर्ने हो भने यो करोडौ रूपैया हुन आउछ । चैत्र २७ गते बेलायतको लागी पानीजहाजमा यात्रा आरम्भ भयो । ५००० पाउण्ड रकममा भाडामा लिएको पि एन्ड ओफुर्सदमा
जंगबहादुर, नेपाल विश्वमा नेपाली Comments are Off